गैँडाकोटमा बृहत विरोध प्रदर्शन हुँदै, महामन्त्री डा. कोइरालाले सम्बोधन गर्ने | Sagun Post
गैँडाकोटमा बृहत विरोध प्रदर्शन हुँदै, महामन्त्री डा. कोइरालाले सम्बोधन गर्ने
गैँडाकोट, १२ पौष । नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाको पक्षमा सोमबार गैँडाकोटमा बृहत कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कम्युनिष्ट सरकारको असंबैधानिक कदम, संसद विघटन, सर्वत्तावाद र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सोमबार भोली बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
संविधानको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै काँग्रेसले देशब्यापी निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रमको तय गरेको छ । सो अन्तर्गत नेपाली काँग्रेस संघीय क्षेत्र नं. १ नवलपुरको आयोजनामा गैँडाकोटमा हुने विरोध कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । सोमबार दिउँसो १२ बजे गैँडाकोट काँग्रेस चोकबाट ¥याली निकालिने पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय सभापति द्रोण वनले गैँडाकोट २ भृकृटी चोकमा बृहत सभाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कुल्चिएको भन्दै संविधान रक्षाको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण जनतामा अपिल गर्नुभएको छ । आफूहरुको आन्दोलन कसैको पक्षमा नभएर संविधान रक्षाको पक्षमा भएको आयोजकले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महिला संघ जिल्ला कोषाध्यक्ष शान्ति न्यौपाने, नेपाली काँग्रेस गैँडाकोटका नगर सभापति तारापति खरेलले नेपाली काँग्रेस कम्युनिष्टको पछि लागेर नभइ अरुलाई संविधान रक्षाका लागि हिंडाएर संविधान रक्षाको अग्र मोर्चामा उभिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस गैँडाकोट उपसभापति शोभाखर रिमाल, गैँडाकोट ५ नेपाली काँग्रेसका वडा सचिव खडानन्द उपाध्याय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण गैँडाकोट ५ नेपाली काँग्रेसका वडा सभापति गोविन्द घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।